Solus 4 ichauya muna Ndira 2018 nerutsigiro rweSnap mapakeji uye zvimwe zvekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unotoziva iro rakakurumbira Solus chirongwa icho chinomira kunze kune yakasarudzika desktop, asi kunyange hazvo iyo yakazvarwa kuti ive inozivikanwa kwazvo distro, haisati yasvika iyo yakakosha yenhoroondo. Uku kugoverwa kweGNU / Linux yakatokunda vashandisi vazhinji uye ikozvino tine mamwe mashoko akanaka, kubvira mu Ndira 2018 ichauya Solus 4 pamwe nekunakidzwa kunatsiridzwa. Naizvozvo, mumazuva mashoma iwe unozokwanisa kuisa ichi kugovera kuti uedze iyo kekutanga kana kana iwe uinayo kare, gadziridza kune iyo nyowani vhezheni kuti ugone kunakidzwa nenhau dzese uye zvakanakira izvo izvo nyowani budiriro ichapa.
Kubudirira inotungamirwa naIkey Doherty yatora nhanho nyowani uye iri kushanda nesimba kuburitsa iyo nhau iyo yatichazokuudza iwe mumazuva mashoma chete. Inoda mashoma ekupedzisira kubata uye mashoma maabbits kuti igadzirire, saka haazi munhu wese achange achishandisa masvondo mashoma sabbatical munharaunda Krisimasi iyi. Zvakanaka, iwe unotoziva kuti Solus anotevera Rolling Kuburitswa kana inoenderera yekuvandudza modhi, asi izvo hazvireve kuti zvakajairwa vhezheni zvinopedzisira zvaburitswa neyakavandudzwa ISOs uye Solus 4 ichave imwe yeizvi.
Chii chitsva kana chakasarudzika pamusoro paSolus 4? Zvakanaka, pamusoro pechinyakare kururamisa kwembugs dzakaonekwa mushanduro dzakapfuura, iyo kodhi optimizations uyezve kuvandudzwa kwesoftware mapakeji akaisirwa neasipo kuitira kuti ari mune yazvino vhezheni, iyo inosanganisira iyo Linux kernel (Linux 4.14 LTS) , iwe uchaonawo kuti s inowedzerwa seiSnap package rutsigiro kupa imwe nzira yepasirese yekuisa software yako uye nekuwedzera chengetedzo sezvaunoziva iwe. Asi zvakare muSoft Center yayo kwaunowana aya mapakeji zvimwe zvinhu zvakagadziridzwa ...
Solus 4 ichaisa zvakare kuona kwakasimba kwevatyairi vehardware kuitira kuti inyatsoona zvese zvishandiso zvaunazvo pamushini wako uye inogona kuwana madhiraivhi akakodzera nekukurumidza. Izvi zvinodaro nekuti Software Center ichave nemhinduro dzinonakidza dzinozoziva iyo Hardware uye kubvunza mushandisi kana vachida kuiisa ipapo ipapo, kubva kumakadhi emifananidzo kuenda kune zvimwe zvekuisa uye zvinoburitsa michina senge mbeva, maprinta, nezvimwe. Kunyange zvakadaro, yako budgie tafura Ichave iri 10.4.1, yekuvandudzwa kudiki iyo isina chekuita nekusvetuka kukuru kwakaitwa mune imwe nzvimbo yedistro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Solus 4 ichauya muna Ndira 2018 nerutsigiro rweSnap mapakeji uye kumwe kugadziridzwa